ကျွန်ုပ်တို့သည် BLU Vivo 5R၊ ပါဝါနှင့်ကြော့ရှင်းမှုအားလုံးကိုပြသသည် Androidsis
BLU Vivo 5R၊ ပါဝါနှင့်ကြော့ရှင်းမှုအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရက်သတ္တပတ်များအတွင်း BLU ကုမ်ပဏီသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်မကြာမီဖြန့်ချိမည့်ထုတ်ကုန်သစ်များကိုဆက်လက်သိကွပါသည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာကငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပြောခဲ့တယ် ဘလူး R2၎င်းသည်အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအကြားမယုံနိုင်လောက်အောင်မျှတမှုရှိခြင်းကိုပြောဆိုနိုင်မည့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။ အခုတော့ဒါဟာအလှည့်ပါ ငါ 5R အသက်ရှင်သည်.
ဤပုံစံသည် BLU ကိုစပိန်တွင်ရောင်းချမည့်စမတ်ဖုန်းများအတွင်းတွင်ရှိသည် မိသားစု၏သြဇာအရှိဆုံး။ ၎င်း၏ညီများကဲ့သို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်စမတ်ဖုန်းသည်အလယ်အလတ်တန်းစား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်သတိမပြုမိဘဲနေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
1 BLU Vivo 5R သည်မိသားစုတွင်အစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်သည်။
3 BLU Vivo 5R ဝိသေသလက္ခဏာများစားပွဲ
BLU Vivo 5R သည်မိသားစုတွင်အစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ပြီးသားအကြောင်းကိုမှတ်ချက်ချအဖြစ် BLU ထုတ်ကုန်များ, ဒီinရိယာ၌ကြီးသောစီးပွားဖြစ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပမှဖြစ်သော်လည်းရှင်းလင်းသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်သူတို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူ၏တိုက်ပွဲယခုအချိန်အထိအမြင့်အကွာအဝေး၌မပါကြောင်းကိုသိမှတ်ကြလော့ သူတို့ကပြောစရာအများကြီးရှိသည့်အလယ်အလတ်တန်းစားသို့အရည်အသွေးမြင့်ဆိပ်ကမ်းများပေးရန်အာရုံစိုက်သည်.
အလယ်အလတ်တန်းစားသည်ခက်ခဲသောမြေအနေအထားဖြစ်သည်ကိုသိရှိပြီး၎င်းတို့ကိုနယ်ပယ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ခေါ်သည့်ဆိပ်ကမ်းအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ စျေးနှုန်းသည်အလွန်တင်းကျပ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် BLU များသည်မကြာမီအသုံးပြုသူများနှင့် ၀ ယ်သူများ၏နှုတ်ခမ်းတွင်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။ ဒီနေ့စပိန်မှာတွေ့ရမယ့်အပြာရောင် BLUs Vivo 5R အကြောင်းခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြမယ်။
ပထမတစ်ချက်မှာ Vivo 5R သည်၎င်း၏လိုင်းများနှင့်ပြီးမြောက်မှုကြောင့်ကြော့ရှင်းပါသည်။ ပြီးတော့လက်ထဲမှာ၊ အာရုံခံစားမှုဟာစီးပွားရေး terminal တစ်ခုရဲ့အဝေးနဲ့သိပ်မဝေးလှပါ။ အတူခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူ သတ္တုကျောဘက်၊ ၅.၅ လက်မရှေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အလွန်ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းအလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးသောထိတွေ့မှုရှိသည့်စမတ်ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းအခြေခံအဖြစ် သတ်မှတ်၍ မရပါ။ Vivo 5R ကိုအလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာစုစည်းထားသည့် uni-body ပုံစံဖြင့်ပြသည်။ ၎င်း၏ဖြောင့်မတ်သောပုံစံနှင့်ပုံသဏ္ာန်များထဲတွင်၎င်း၏ကွေးသော panel သည်ထူးခြားကောင်းမွန်သောသုတ်ဆေးနှင့်အတူ terminal တစ်ခုထဲသို့အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသည်။
La Full HD resolution ဖြင့် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင် ပူနွေးသာယာသောအရောင်များကိုကမ်းလှမ်း။ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုသည်အပြင်ဘက်ရှိစာတစ်စောင်ကိုလွယ်ကူစွာဖတ်ရန်လွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ ကောင်းမွန်သောညှိထားသောအဖြူရောင်ဟန်ချက်နှင့်ရွေ့လျားမှုအကွာအဝေးနှင့်အတူအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။
အဆိုပါ Vivo 5R တစ်ရှိပါတယ် 6753 GHz Octa-core Mediatek 1.3 ပရိုဆက်ဆာ။ တစ်ဦး3GB RAM နှင့် 32 GB internal memory ဒီစမတ်ဖုန်းကိုပြိုင်ဘက်တွေကြားမှာနေရာချပါ။ ဒီ Vivo 5R ကိုသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးတောင်းဆိုမှုနဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်တယ်။ လေးလံသောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ဂိမ်းများသည်၎င်း၏လွယ်ကူချောမွေ့မှုနှင့်“ လွယ်ကူခြင်း” ကိုအသိအမှတ်ပြုခံထားရသော terminal များကိုသတိရစေနိုင်သည်။
ကင်မရာတွေမှာတော့ Vivo 5R ကသင့်ကိုလျစ်လျူရှုမှာမဟုတ်ဘူး။ က 13 LED Flash ပါသည့်အဓိကကင်မရာ Megapixelမျက်နှာပြင် resolution နှင့်အတူသင်၏ဖမ်းယူချက်များကိုအခြားအဆင့်သို့ယူသွားလိမ့်မည်။ ယင်း 8 Megapixel ရှေ့ကင်မရာ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပြီး၎င်းသည်လျှပ်တစ်ပြက်မီးနှင့်လည်းလိုက်ပါသည်။ သင် sefies ကိုကြိုက်လျှင်မျက်နှာသာအတွက်အချက်တစ်ချက်။ မီးမောင်းထိုးပြ အဆုံးမဲ့ဆက်တင်များကိုပေးသည့်ကင်မရာအက်ပ် နှင့်အလွန်လွယ်ကူသောကိုင်တွယ်သက်ရောက်မှု။
ဘက်ထရီအပိုင်းကိုအထူးဖော်ပြသင့်သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရဆိုလျှင် terminal ကိုအလွန်ပါးလွှာသည့်အခါ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုထိခိုက်စေသည်။ ဤသည် Vivo 5R ခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ BLU ကိုထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည် ပါးလွှာသောစမတ်ဖုန်းတွင် ၃,၁၅၀ mAh ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ဘယ်လည်းရှိပါတယ် အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနည်းပညာ။ သင်မည်မျှအသုံးပြုပါစေ charger နီးကပ်စွာထားရန်တစ်နေ့လုံးစိတ်ပူစရာမလိုပေ။
နောက်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ Flash အောက်မှာရှိတယ် ဒီဂျစ်တယ်လက်ဗွေဖတ်စက်။ နောက်တဖန်ပြိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်ခြားနားတဲ့အမှတ်ကမ်းလှမ်းတစ်ခုခု။ ဒါကဖုန်းကိုလုံခြုံရေးပိုမိုမြင့်မားစေတယ်။ တိုတိုပြောရရင်၊ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များ, ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အားလုံး၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအထက်, စပိန်အတွက်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုငါသိ၏ ယူရို ၃၆၀ လောက်ရှိလိမ့်မယ် သေချာတဲ့အောင်မြင်မှုထက်အများကြီးအကြောင်းအများကြီးကပြောပါတယ်။
BLU အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းများကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းများနှင့်အတူလိုက်ပါကြောင်းမှတ်ချက်ပြုပါ။ The Vivo 5R တွင်၎င်း၏သေတ္တာအတွင်းဆီလီကွန်အဖုံးသို့မဟုတ်နောက်ကျောဖုံးပါရှိသည်ရန် လည်းပဲ မျက်နှာပြင် saver။ ကိရိယာကိုစနစ်တကျကာကွယ်ရန်အတွက်ငွေသုံးရန်လိုသည့်အခြေခံများ။
BLU Vivo 5R ဝိသေသလက္ခဏာများစားပွဲ
ပုံစံ ငါ 5R အသက်ရှင်သည်
operating system ကို Android 7.o Nougat ဖြစ်ပါတယ်။
ဖန်သားပြင် ၅.၅ » Full HD
Processor ကို Mediatek 6753 Octa Core 1.3 GHz
သိုလှောင်မှု 32 GB ကိုချဲ့ထွင်
နောက်ကင်မရာ LED flash ကိုနှင့်အတူ 13 Mpx
ရှေ့ကင်မရာ flash နှင့်အတူ 8 Mpx
ဘက်ထရီ 3150 mAh ဘက်ထရီ
စြေး ယူရို ၂၀၀ +/-
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » BLU Vivo 5R၊ ပါဝါနှင့်ကြော့ရှင်းမှုအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
ကောင်းမွန်သော ၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်စရာကောင်းသောဘက်ထရီပါသည့်စမတ်ဖုန်း ၆ လုံး